အောင်ဝေး –တော် လှ န်ရေးနှ င့် ပ တ် သ က် ၍ | MoeMaKa Burmese News & Media
အောင်ဝေး –တော် လှ န်ရေးနှ င့် ပ တ် သ က် ၍
(၂) ထိုအခါ ကာတွန်းဆရာတချို့ က “တော်လှန်ရေး” ဟူသောဝေါဟာရကို သရော်စော်ကားရာရောက်သည့် ကာတွန်းများရေးဆွဲလာကြပါသည်။
(၃) တချို့ သော ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာများကလည်း။ ကျောင်းသားတချို့ ကိုဝေဖန်ရင်း “တော်လှန်ရေး” ဝေါဟာရကို အောက်တန်းကျစေသည့် အရေးအသားများရေးသားလာကြပါသည်။
(၄) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကျောင်းသားများကြားတွင် ၀င်၍ခလောက်ဆန်ကြသော။ ယခင်ကြံ့ ဖွတ်အစိုးရဟောင်း သစ္စာရှိသူများနှင့် NLD ထဲက ခြေစုံကန်ထွက်ခဲ့သည့် သစ္စာဖောက်များပေါင်းမိပြီး၊ “တော်လှန်ရေး” ဝေါဟာရကို သေးသိမ်အောင်လုပ်ဇာတ်ခင်းကြပြန်သည်။
“ငါတို့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ တာဝန်က တက်လာသမျှအစိုးရ ဆန့် ကျင်ဖြုတ်ချဖို့ ပဲ” တဲ့။ (စာရေးဆရာ အောင်ကျော်စည် ရဲ့ ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ထဲက စာသားပါ။ ၀တ္ထုမမှတ်မိတော့။ ခင်ဗျားတို့ ကိုစိန်ခေါ်တယ် ထဲကလား။ အားလုံးညာနေကြသည် ထဲကလား။ တစ်ခုထဲကပဲ)
One Response to အောင်ဝေး –တော် လှ န်ရေးနှ င့် ပ တ် သ က် ၍
Htwe on April 11, 2016 at 5:25 am
Thank you so much. something made them to argue. Thanks again for the useful article.